China Electric Mobile Racking System rụpụta na Factory | Huade
Egwuregwu eletriki mkpanaka eletriki bụ sistemụ dị elu maka ị nweta ohere na ụlọ nkwakọba ihe, ebe a na-etinye racks na chassis mobile na-eduzi site na egwu na ala, ọ bụ ezie na nhazi dị elu nwere ike ịrụ ọrụ na-enweghị egwu.
Ejiri chassis nwere moto na-eme ka racks nwee ike ịgafe n'okporo ụzọ, na-ahapụ oghere maka forklift iji nweta. Achọrọ imeghe naanị otu wara wara kama ịmegharị ọtụtụ wara wara ka forklift gafere dịka na usoro nchịkọta nhọrọ nhọrọ.
Ihe nchebe dị ka mgba ọkụ nkwụsị mberede, mgbochi nnweta fotoelectric, sistemụ ntọhapụ akwụkwọ ntuziaka, ihe mmetụta sensọ dị nso yana mgbochi nchekwa fotoelectric nọ n'ọnọdụ iji hụ nchekwa nke ndị ọrụ na ngwongwo.
Ejiri igwe eletriki igwe eletrik nwere PLC iji mezuo iwu site na njikwa site n'aka onye ọrụ, ọrụ ndị dị ka ịbawanye oghere oghere n'etiti chassis maka ikuku ikuku ka mma nwere ike ime site na mmemme PLC, ọrụ ndị dị otú a na-eme ya usoro mgbochi akpaaka .
A na-edozi okpokoro kwụ ọtọ na chassis ahụ, a na-ejikwa ogidi iji kwụnye pallets ahụ ma jikọta ikike na chassis, mgbe ụfọdụ a na-eji shelf maka nchekwa nke obere ihe. Ebe ọ bụ na ịdị elu nke forklift nwere ike iru nwere oke oke, usoro a na-abụkarị maka ụlọ nkwakọba ihe nwere obere na ọkara dị elu.
Sistemụ igwe eletriki igwe eletrik dị mma maka ndị ọrụ chọrọ ịgbasa nchekwa mana enwere oke ala site na oghere ala n'ụlọ nkwakọba ihe. Oghere ala ejiri mee nke ọma na-enye sistemụ mkpanaka igwe zuru oke maka nchekwa nchekwa.
Uru nke igwe eletriki igwe eletrik:
Ogologo ohere nchekwa na enweghị oghere ala ọzọ
Low mmezi na anụ ọrụ
Ọnọdụ na-agbasa n’abalị na-enye ohere ikuku ikuku dị mma (maka nchekwa oyi)
Sistemụ njikwa dị iche iche na sensọ iji chekwaa gburugburu ebe nchekwa
Nke gara aga: Shuttle Carrier Sistem
Osote: Suttle Racking Sistemụ